ဟာသနော်..... ;) - ဒီလို ငါ့သမီး*** ဒီလို ငါ့သမီး* ~ ITmanHOME
11:04 ဟာသ No comments
ဟာသနော်..... ;) - ဒီလို ငါ့သမီး*** ဒီလို ငါ့သမီး*
.အများသုံး အိမ်သာတစ်ခုထဲဝင်ပြီးကာမှ ထိုင်ရုံရှိသေးသည်။ ဟိုဖက်အိမ်သာထဲက လူက လှမ်းနှုတ်ဆက် သည်။
ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ အလ္လာပသလ္လာပ စကားပြောရတာ စိတ်မသက်မသာ ရှိလှသည်။ မကောင်းတတ်တော့ လည်းပြန်နှုတ်ဆက်ရသည်ပဲပေါ့။
ဟာ… ဒီလူတော့ ခက်ပြီ. ဘာလဲကွာ… ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ဒီလို ဂွတီးဂွကျမေးခွန်းတွေ လာမေးနေတာ ဘာလဲ….စိတ်ပေါက်ပေါက်နှင့် ဘုတောပစ်လိုက်သည်။
ဗုဒ္ဓေါ…….ဒီလူဘယ်လိုလူလဲ ဂေးလား. ဂျော်ရကီးလား. ဘာကောင်လဲကွာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကျင်လည် ကျက်စားနေရာ နေရာမဟုတ်၍ သတိတော့ ထားနေရသည်။ ထောင်းခနဲ ထွက်လာသော ဒေါသကို အသာချိုးနှိမ်လျက် အသံ ခပ်အုပ်အုပ်ဖြင့် ပြန်ဖြေလိုက်သည်။
“မလုပ်နဲ့လေဗျာ… ကျွန်တော်လည်း ဒီမှာ အလုပ်ရှုပ်နေတာ..”
“နောက်မှပဲ ပြန်ဆက်တော့မယ်… ဟိုဖက်အခန်းထဲက သောက်ပေါတစ်ကောင်က ရူးသလို နှမ်းသလိုနဲ့ ငါမေးသမျှပြန်လိုက်ဖြေနေလို့….”
ကလေး။ ။ ဖေဖေ၊ သမီးကို ဘယ်လိုမွေးလာတာလဲဟင်
ဖခင် ။ ။ အေး၊ သမီး။ သမီးတစ်နေ့နေ့မှာသည်လိုမေးမှာပဲလို့ ဖေဖေ တွက်ထားတာကွ၊
ဒီလိုကွာ။ ။မင်းအမေနဲ့ဖေဖေ chat room မှာ chatting လုပ်ရင်းသိခဲ့ကြတယ်။
နောက် cyber cafe ဆိုင်တွေကနေ email တွေအပြန်အလှန်ပို.ကြတယ်၊
ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမင်းအမေက ဖေဖေ့ကို download လုပ်နုိုင်တယ်လို့ ခွင့်ပြုတယ်။
သူကလည်းဖေဖေ့ကို uploaded ပြန်လုပ်တယ်၊ အဲဒီတုန်းက connection
ဖေဖေတို့နှစ်ယောက်လုံး firewall ချမထားမိဘူး၊ ပြီးတော့ delete button
နောက် ကိုးလကြာတော့ မင်းကိုရလာတာပေါ့၊ အဲသည်အချိန်က virus
current ကလည်းလုံးဝမှန်နေခဲ့တာ၊ မင်းကံကောင်းတယ် သမီး......။